अस्पतालमा उपचाररत मोडेल निशा घिमिरेको मृत्यु को हल्ला कस्ले गर्यो ? के हो वास्तविकता ? - Mero Tv Online
admin - २०७८, १३ भाद्र आईतवार ०३:०४ 0
Home समाचार अस्पतालमा उपचाररत मोडेल निशा घिमिरेको मृत्यु को हल्ला कस्ले गर्यो ? के...
काठमाडौ । नायिका तथा कलाकार निशा घिमिरे ( nisha ghimire ) हाल नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत छिन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था पहिले भन्दा केही सुधारोन्मुख छ । उनको उपचारको लागि भनेर देश विदेशबाट विभिन्न कलाकार एवं सामाजिक अभियन्ता हरूले सहयोग जुटाइरहनुभएको छ।
भिडियो admin - २०७८, १३ भाद्र आईतवार ०३:०४ 0
समाचार admin - २०७८, १३ भाद्र आईतवार ०३:०४ 0